Gaalkacyo: Taliska Laamaha Ammaanka Mudug Oo Fashil qirtay“Waxaan u baahnahay Ciidamo Amniga Gaalkacyo suga”
Taliska laamaha Ammanka ee gobolka Mudug ee Puntland ayaa qirtay inay ku fashilmeen oo ku guuldaraysteen ilaalinta Ammaanka Gaalkacyo, ka hortagga dilalka qorshaysan iyo dabagalka iyo soo qabashada dadka falalka Amni xumo gaysta xilli magaalada Gaalkacyo ay noqotay magaalo indhihii laga riday oo dadkii waxgaradkii ahaa iyo intii wax ku ool-ka ahayd madaxa loo duubtay qaarkoodna la isku qarxiyey, iyadoo magaalada ay joogaan ciidamo ammaanka loogu talogalay balse noqday kuwo gablamay oo aan waxba baddeli karin.
Taliyaha ciidanka Birmad gobolka mudug ahna taliye ku xigeenka Booliiska gobolka mudug Gaashaanle dhexe C/rashiid Xassan Xaasi (Gebi-gebi) oo wareysi siiyey Radio Daljir ayaa sheegay in sababta loo sugi la yahay Ammaanka magaalada Gaalkacyo ay tahay dhowr sababood oo kala ah:-
Tayo xumada iyo dhaqaalo xumada haysata ciidamada Ammaanka ee magaalada.
Shacabka magaalada oo aan xogta u soo gudbin lana shaqayn ciidamada Ammaanka.
Gaalkacyo oo ah magaalo labo maamul ay ka taliyaan, ayna ku nool yihiin dad badan oo aan u dhalan.
Dadka Maalintii ka shaqaysta Waqooyiga Gaalkacyo oo habeenkii u hurdo taga Xaafadda Baraxleey ee Galmudug oo aan la aqoon wixii ay gaystaan.
Taliye Gebi-gebi wuxuu sheegay in magaalada Gaalkacyo ay u baahan tahay ciidamo xoog leh oo iskugu jira Booliis iyo sirdoon, kuwaas oo si dhab ah uga hawlgala Ammaanka magaalada, maadaama ay soo badanayaan dilalka loo gaysanaya dadka Gaalkacyo wax ku ool-ka u ah.
Sidoo kale Gebi-gebi wuxuu shacabka magaalada Gaalkacyo ku eedeeyay inay booliiska ka qariyaan xogaha ay ka dhex helaan goobahooda ganacsiga, xaafadahooda iyo meelaha la iskugu yimaada, maadaama dadka dhibka wada ay shacabka ku dhex jiraan.